Забур 88 CARS - Nnwom 88 AKCB
1Awurade, woyɛ me nkwagye Nyankopɔn
misu wɔ wʼanim adekyee ne adesae.
2Ma me mpaebɔ nnu wʼanim;
na me nkwa rebɛn owu.
4Wɔkan me fra wɔn a wɔrekɔ ɔda mu no;
mete sɛ obi a onni ahoɔden.
5Wɔayi me asi nkyɛn wɔ awufo mu,
te sɛ atɔfo a wɔdeda ɔda mu,
6Woatow me akyene ɔda ase tɔnn,
wɔ sum kabii mu.
7Wʼabufuwhyew ayɛ duru wɔ me so;
8Woafa me nnamfonom a wɔbɛn me afi me nkyɛn
Woaka me ahyɛ mu na mintumi nguan;
9awerɛhow ama mʼani so ayɛ kusuu.
Awurade misu frɛ wo da biara;
metrɛw me nsam kyerɛ wo.
10Woyɛ anwonwade kyerɛ awufo ana?
Wɔn a wɔawuwu no sɔre kamfo wo ana?
11Wɔka wʼadɔe ho asɛm wɔ ɔda mu,
anaasɛ wo nokware ho asɛm wɔ ɔsɛe kurom ana?
12Wohu wʼanwonwade wɔ beae a hɔ aduru sum,
anaa wo trenee nnwuma no wɔ awerɛfiri asase so ana?
13Nanso Awurade, misu frɛ wo sɛ boa me;
me mpaebɔ du wʼanim adekyee mu.
14Adɛn, Awurade, na wopo me
na wode wʼanim hintaw me?
15Mahu amane fi me mmofraase na mabɛn owu;
wʼahunahuna ama mabrɛ na mapa abaw.
16Wʼabufuwhyew abu afa me so;
17Daa nyinaa wotwa me ho hyia sɛ nsuyiri,
18Woafa me yɔnkonom ne mʼadɔfo afi me nkyɛn kɔ;
na sum ayɛ mʼadamfo a ɔbɛn me pɛɛ.
AKCB : Nnwom 88